Administrator | U.N.O.B | Page 4
2nd Annual Meeting & Election
UNOB ၏ ဒုတိယအကြိမ် ညီလာခံနှင့် အလုပ်အမှုဆောင် အသစ် ပြန်လည်ရွေးကောက်ပွဲကို 8/27/2011 ညက Deerfield Beach ရှိ Asian Buffet & Grill ဆိုင်တွင် ပျော်ပျော်ပါးပါး ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ အခမ်းအနားမှုး ကိုစိန်မြင့်အောင်၊ ဥက္ကဌ ၏ အမှာစကား၊ အတွင်းရေးမှုး၏ ကျေးဇူးတင် စကား၊ ဘဏ္ဍာရေးမှုး၏ စားရင်းရှင်းတမ်း၊ အဖွဲ့ဝင် တစ်ချို့၏ အကြံပေးမှု အစီအစဉ်များ ပြီးသည့်နောက် အမှုဆောင်အသစ်နေရာများကို မဲစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ အမှုဆောင်များရွေးချယ်ပြီးသည့်နောက် Bingo ကစားကြပြီး အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ရုတ်သိမ်းခဲ့ကြပါသည်။ Bingo နှစ်ပွဲ ကစားခဲ့ကြပြီး နှစ်ပွဲစလုံး၏ ပထမဆုများကို (ထူးထူးဆန်းဆန်း) ဥက္ကဌကတော် မထွေးထွေးစိန်မှ တစ်ဦးတည်း ဆွတ်ခူးသွားပါသည်။ Read More...
Some show videos from Orlando night. Enjoy… visit this channel for more videos,, http://www.youtube.com/htunlinnlatt .. …. ….. …. Read More...
အဖွဲ့ဝင်များ၏ အားကြိုးမာန်တက် အကူအညီပေးမှုများကြောင့် မျိုးနွယ်စုသတင်းစာစောင် အမှတ် ၂ ကို မကြာခင် ဖြန့်ဝေနိုင်တာ့မည်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နှောင့်နှေးခဲ့ရသော်လည်း အရင် အမှတ်(၁)ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားထားပါသည်။ နောက်ထွက်မည့် စာစောင်များကိုလည်း အတွေ့အကြုံများ စုဆောင်းရင်း၊ လေ့လာရင်းဖြင့် တစ်စောင်ထက် တစ်စောင် ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် ကြိုးစားသွားကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင့်တော်သော စာမူများကိုသော်လည်းကောင်း၊ စာရိုက်စာစီ အကူအညီပေးနိုင်မည့် သူများကိုသော်လည်းကောင်း ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင် ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ စာစောင်ရယူလိုပါလျှင် info@unobusa.org သို့ အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ နှင့်တကွ ဆက်သွယ်ပါ။ အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ Online ပေါ်တွင် အလွယ်တကူ ဖတ်ရှု့နိုင်ရန် PDF file Link ကို အောက်ဖက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ မိမိ Connection Speed ပေါ် မူတည်၍ အချိန် အနည်းငယ် ကြာကောင်း ကြာပါလိမ့်မည်။ Click Here to view PDF File Read More...
This is justadraft. I will wrap it up tomorrow. Direct link http://unobusa.org/wp-content/uploads/2011/07/UNOB_newsletter_2print.pdf http://unobusa.org/wp-content/uploads/2011/07/UNOB_newsletter_2print.pdf Read More...
8th E.C meeting
At the 8th U.N.O.B. E.C. meeting took place at the residence of Ko Yar Zar and family on July 9th 2011. We’ve decided to hold Annual business meeting, re-election and conference on Aug 27th, 2011 in Boca Raton. The members of the Event Committee will be announced soon. Some Representatives who couldn’t make it to the meeting, attended via web-cam. Mr. James Lintun( Sarasota), Mr. Maung Soe( Tampa Bay) and Mr. Zaw Min Oo( N/S Carolina). Some of E.C. members enjoying very delicious meals right before Read More...
Useful Apps for an iPhone
အိမ်အတွင်း မှာ PC နှင့် TV တွဲပြီး အသုံးပြုသူများအတွက် Touch Mouse လို့ခေါ်တဲ့ iPhone App တစ်ခုက အလွန် အသုံးဝင်ပါတယ်။ Free Version ဖြစ်ပြီး Logitech Company က App ဖြစ်ပါတယ်။ iPhone ကို Wireless Mouse လို Wireless Keyboard လို အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ WiFi Network (Wireless Router) ရှိဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အိမ်မှာ ရှိတဲ့ Computer တွေ အားလုံးကို ချိပ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဘာတွေ လိုအပ်ပြီး၊ ဘယ်လို Install လုပ်ရမလဲဆိုရင်. Requirements… ( an iPhone or iPAD or iPod,aPC or MAC, Wi-Fi Network) (၁) iPhone မှ တစ်ဆင့် App store မှာ Touch Mouse ဆိုပြီး ရှာပါ။ Free ဖြစ်ပြီးတော့ Logitech Product ဖြစ်ပါတယ်။ Download လုပ်ပြီး Install လုပ်ပါ။ (၂) သင့်ရဲ့ Read More...
ထေရ၀ါဒ သံဃ၀ိဟာရ ကျောင်းဆောင်သစ် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကို West Palm beach, Florida တွင် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးမှ ကြီးမှူး၍ အခြားဖိတ်ကြားထားသော ဆရာတော်ကြီးများ အပါအ၀င် လူသူဧည့်ပရိသတ်မြောက်များစွာဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ အစီအစဉ်ကို Internet မှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး ထပ်မံကြည့်ရှု့လိုသူများ ပြန်လည်ကြည့်ရှု့ နိုင်ရန် UNOB Web site မှတစ်ဆင့် ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။ Running Time:2hrs 20mins Flash Video Player Read More...
Cheap Online Video Rental
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနားယူ အပန်းဖြေချိန်များထဲမှာ ဗွီဒီယို ကြည့် အနားယူ ခြင်းသည်လည်း ကဏ္ဍတစ်ခု အဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်။ ဆိုင်မှာ သွားရောက် ငှားခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ Kiosk စက်များမှ သော်လည်းကောင်း၊ Online မှသော်လည်းကောင်း နည်းမျိုးစုံနဲ့ ရနိုင်ပါတယ်။ Online ကနေ Instant ငှားပြီး ကြည့်နိုင်တဲ့ Web site တွေထဲမှာ လောလောဆယ် Netflix က အသက်သာဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်လ ကို $7.99 ဖြစ်ပြီး Contract လဲ လုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်အိမ်မှာတော့ Internet အမြန်လိုင်း ရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်။ တစ်လကို $9.99 ($2) ပိုပေးရင် DVD ကို Mail ကနေလဲ မှာနိုင်သလို Online မှာ လဲ ကြိုက်သလောက် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ် Plan တွေကို netflix.com မှာ သွားရောက် ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ Blu-Ray Player, TVs တွေမှာ Internet Access လုပ်ဖို့ Wi-Fi သို့မဟုတ် Ethernet Port တွေပါ ပါတယ်။ အဲဒီကနေတစ်ဆင့် ကိုယ့်အိမ်က Router ကို ချိပ်ပြီး Read More...